Uphanda njani iiHashtag eziBalaseleyo | Martech Zone
IiHashtags bezikunye nathi ukusukela ngoku ukumiliselwa kwabo kwiminyaka esi-8 eyadlulayo Kwi-Twitter. Esinye sezizathu zokuba siphuhlise shortcode iplagi yayikukunyusa ukubonakala kwethu kwi-Twitter. Inqaku eliphambili lalonto yayikukwazi ukongeza ii-hashtag ngaphakathi kwekhowudi emfutshane. Ngoba? Ukubeka ngokulula, abantu abaninzi baphanda nge-Twitter ngokuqhubekayo ngokusekwe kwii-hashtag ekwabelwana ngazo. Njengamagama aphambili abalulekileyo ekukhangelo, ii-hashtag zibalulekile kukhangelo lweendaba zoluntu.
Enye yezona ndawo zethu zidumileyo zezethu Uluhlu lwezixhobo zophando ze-hashtag iyafumaneka kwiwebhu. Kodwa umthengisi usebenzisa njani esinye sezixhobo zokuchonga ii-hashtag ezifanelekileyo zokunyusa ukubonakala kohlaziyo lweendaba zentlalo.
Isizathu sokuba ii-hashtag zithandwa kakhulu kungenxa yokuba zivumela iposti yakho ukuba ibonwe ngabaphulaphuli ababanzi abanokuthi bangabinakunxibelelana nawe. Kubalulekile ukuqonda ukuba zenziwe njengenkonzo, njengendlela yokunciphisa inkqubo xa kuziwa ekufumaneni ezinye izithuba malunga nezihloko onomdla kuzo.
Lo mzekelo weSalesforce usebenzisa izixhobo ezininzi.
On I-tagboard, Ingcebiso kukuphononongwa kweenkcukacha-manani, uluvo kunye nee-hashtag ezinxulumene nazo kumaqonga amajelo eendaba. Injongo yakho kufuneka ibe kukuchonga ezona zinto zidumileyo ezifanelekileyo kakhulu kwisihloko sohlaziyo lweendaba zentlalo okanye inqaku obhekisa kulo.
On Twitter, ungasebenzisa ukusebenza okunzulu kokukhangela. Khangela ixesha kwibhokisi yokukhangela kwaye unako ukunciphisa iziphumo ngokusebenzisa iithebhu ezininzi - phezulu (iifoto kunye neetweets), bukhoma, iiakhawunti, iifoto kunye nevidiyo. Unokucoca ukukhangela kwi-Twitter okanye ngaphakathi kwenethiwekhi yakho. Unokwazi ukukhangela nje ngeenxa zonke kuwe.
On Instagram, Kufuneka uchwetheze i-hashtag kunye ne-Instagram iya kuncoma kwangoko iithegi ezihamba kunye nokubalwa kwabo kweposi. Yongeza ii-hashtag ezifanelekileyo kwaye zibala ngokuqinileyo.
Ngelixa i-Twitter imisela umda kubalinganiswa bakho ngokubanzi ekwabelwana ngabo kuhlaziyo lwakho, kubandakanya ii-hashtag, i-Instagram ikuvumela ukuba wabelane ngee-hashtag ezili-11 kumfanekiso ngamnye okanye ividiyo ekwabelwana ngayo!
Nantsi ingcebiso yam… be zihambelana! Khawufane ucinge ngomsebenzisi ophanda i-hashtag oyibhalayo kunye nezinye iiakhawunti zemidiya yoluntu. Ngoku, khawufane ucinge ngomsebenzisi ophanda i-hashtag kwaye uhlala efumanisa umxholo omtsha kunye nohlaziyo oluveliswe nguwe. Ucinga ukuba yeyiphi ekubonelela ngethuba elingcono lokulandelwa, ukwakha ulwazi, ukuzibandakanya neakhawunti, okanye ekugqibeleni wenze ishishini nayo.
Khawufane ucinge ngomsebenzisi ophanda i-hashtag obhala ngayo kunye nezinye iiakhawunti zemidiya yoluntu. Ngoku, khawufane ucinge ngomsebenzisi ophanda i-hashtag kwaye uhlala efumanisa umxholo omtsha kunye nohlaziyo oluveliswe nguwe. Ucinga ukuba yeyiphi ekubonelela ngethuba elingcono lokulandelwa, ukwakha ulwazi, ukuzibandakanya neakhawunti, okanye ekugqibeleni wenze ishishini nayo.
tags: Eyona hashtagkhetha ii-hashtaguphando lwe-hashtagkwenziwa kanjaniinstagramkelsey jonesintengiso CanadaitheyibhileTwitter
Ngomhla wama-21 ku-Disemba 2015 ngo-7: 06 AM
Enkosi ngolwazi, Douglas. Ndingathanda ukongeza amava am ngokusetyenziswa kwe-hashtag.
-I-Instagram. Ukuphoxeka njengoko abantu bezisebenzisela ugaxekile kunye nomxholo ongafanelekanga. Umzekelo #ulwandle lundibonisa kuphela imifanekiso emi-4 enxulumene nolwandle kunye nabanye kuyo nayiphi na enye into kodwa hayi ulwandle.
-Twitter. Imeko ingcono, kodwa ayikabi yintle kakhulu. Ekuphela kwento endifuna ukuyithetha kukuba izinto ezixabisekileyo ezine-hashtag ezifanelekileyo zinikezela ngengxolo. Ke ukutsala umdla kuyo kufuneka usebenzise enye into, njengomfanekiso omkhulu okanye ukukhankanya abantu kwinkcazo
Dec 21, 2015 ngo-12:55 PM
Inqaku elihle, Alex. Kuyadanisa ngokupheleleyo xa bexhatshazwa. Mhlawumbi baya kongeza inkqubo yokunika ingxelo kwixesha elizayo apho i-hashtag spammers inokubanjwa kwaye iiakhawunti zabo zicinywe.